Iindaba-Amazwe atyikitye ngokusesikweni icandelo lezixhobo ze-RCEP ezingenise imeko entsha yorhwebo
Ngomhla kaNovemba 15, 2020, iindaba ezinkulu zeza kwaye zaba kukugxila kwamazwe kwihlabathi liphela. Emva kweminyaka esibhozo yothethathethwano, iinkokheli zamazwe ali-15, kubandakanya i-China, i-Japan kunye ne-Singapore, batyikitya isivumelwano se-RCEP ngenkomfa yevidiyo.
Kufunyenwe ukuba i-RCEP ngokubanzi ibhekisa kubuDlelwane boQoqosho oluBanzi, kwaye amazwe angamalungu ayo abandakanya i-Indonesia, iMalaysia, iPhilippines, iThailand, iSingapore, iBrunei, iCambodia, iLaos, iMyanmar, iVietnam, iChina, iJapan, iRiphabliki yaseKorea, iAustralia. naseNew Zealand. Isivumelwano sigubungela ukupheliswa kwezithintelo zorhwebo lwangaphakathi, ukudala nokuphucula imeko yotyalo-mali yasimahla, ukwandiswa korhwebo kwiinkonzo, ukukhuselwa kwamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, umgaqo-nkqubo wokhuphiswano kunye nezinye iindawo.
Ngokwesivumelwano phakathi kwamazwe ali-15 aya kwamkela indlela yamabhanti amabini entengiso yempahla yenkululeko yokwenza amalungiselelo, emva kokuba isivumelwano siqale ukusebenza ngaphakathi kommandla ngaphezulu kwe-90% yorhwebo kwimpahla ekugqibeleni iya kuzuza irhafu, kwaye ikakhulu isezantsi. Irhafu kwi-zero kunye ne-tax ephantsi ukuya kwi-zero kangangeminyaka eli-10, kulindeleke ukuba yenze indawo yokurhweba yasimahla ye-RCEP ngexesha elifutshane ngokuthe kratya kuzo zonke iimpahla zokurhweba ngokukhululekileyo.
UMphathiswa wezeMali uthe ukutyikitywa ngempumelelo kwe-RCEP kudlala indima ebaluleke kakhulu ekuphuculeni ukubuyela emva ko bhubhane kwezoqoqosho kunye nokukhuthaza ukuchuma kwexesha elide kunye nophuhliso lwawo onke amazwe. Ukukhawulezisa okuthe kratya kwenkululeko yorhwebo kuya kuzisa umfutho omkhulu kwimpumelelo yezoqoqosho nezorhwebo. Izibonelelo ezikhethekileyo zesi SIVUMELWANO ziya kuthi zixhamle ngokuthe ngqo kubathengi nakumashishini, kwaye ziya kudlala indima ebalulekileyo ekutyebiseni ukhetho kwimarike yabathengi kunye nokunciphisa iindleko zorhwebo kumashishini.
Ukutyikitywa kwaso nasiphi na isivumelwano ekugqibeleni kuya kubuyela kuphuhliso lwezoqoqosho kunye nezibonelelo zabantu. Kwishishini lezixhobo lase China nakwizixhobo, ukutyikitywa kwe-RCEP kuya kukhuthaza kakhulu "ukuphuma" kunye "nokuzisa" kwishishini lezixhobo zase China kunye nezixhobo, kuvule imeko entsha yorhwebo.
Njengesixhobo kunye nezixhobo ezisetyenziswa ngokubanzi kumzi mveliso, ezolimo, uphando lwezenzululwazi kunye nezinye iinkalo zokulinganisa, ukuqokelela, ukuhlalutya nokulawula, izixhobo kunye neemveliso zemitha zigubungela phantse onke amabakala emisebenzi yabantu. Emva kwamashumi eminyaka okuphuhliswa, isixhobo sase China kunye neshishini lezixhobo sele lenze uluhlu lwemveliso olupheleleyo, kunye nenqanaba elithile lemveliso kunye namandla ophuhliso lwenkqubo yezorhwebo, ukukhula kuyakhawuleza kakhulu, ezinye iimveliso ziyahlangabezana nemfuno yentengiso yasekhaya, kodwa nenani elikhulu yokuthumela ngaphandle kwintengiso yaphesheya.
Kuyinyani ukuba iirhafu zase-US zibeke uxinzelelo kwinzuzo yabathumeli-zimpahla abaninzi okoko yaqala imfazwe yorhwebo yowama-2018, kodwa kunyaka ophelileyo uninzi belufuna ngenkuthalo ukwahlukahlukana kweemarike zabo ukunciphisa ifuthe leerhafu zethu.
Ngeli xesha, esona sibonelelo sikhawulezileyo sokusayinwa kwe-RCEP kukucutha kweerhafu zorhwebo phakathi kwamazwe AMALUNGU esiVUMELWANO, esenza ukuba kube lula kwiinkampani ukutyala imali nokuthumela iimpahla kunye neenkonzo kumazwe aphesheya. Kumashishini abandakanyeka kurhwebo lwezixhobo kunye neemitha zokuthumela ngaphandle, kuyanceda ukwandisa ukuthunyelwa kwemveliso kwamanye amazwe, ukwandisa ingeniso yeshishini, ukuphucula ukhuphiswano lweemveliso nokwandisa imarike yaphesheya.
Ukongeza, ngenxa yokuncitshiswa kweerhafu, izixhobo kunye neemitha zemveliso kuthungelwano jikelele lwentsebenziswano kunye nentsebenziswano kunye nokufikeleleka ngakumbi, ngaxeshanye, iimarike zamanye amazwe nezasekhaya zinokutshintshiselana ngokulula ngakumbi kwezinto ezifunekayo, ezilungele amashishini asekhaya ukungenisa isixhobo kunye neemveliso zeemitha ukuhlangabezana nemfuno.
Ngeli xesha, amazwe e-15 atyikitye i-RCEP. Kwifom yokuzibophelela kweerhafu yelizwe ngalinye, isixhobo kunye neemveliso zemitha ezichaphazelekayo zibandakanya iifomathi, abahlalutyi bezinto ezinokusetyenziswa kunye nezinye izixhobo nezixhobo ezisetyenziselwa ukulinganisa umbane okanye ukuhlolwa. Oomatshini bokuvavanya kunye nezixhobo zokwenza lukhuni, ukomelela, ukuqina, ukuthamba okanye ezinye iipropathi zoomatshini; Izixhobo zohlalutyo lomzimba kunye nemichiza (umzekelo, i-chromatograph yegesi, i-chromatograph engamanzi, i-spectrometer).
Kuyabonakala ukuba ngokuphunyezwa kwemithetho efanayo yemvelaphi, iinkqubo zesiko, ukuhlolwa kunye nokuvalelwa wedwa, imigangatho yezobugcisa kunye neminye imigaqo, ukupheliswa komrhumo kunye nezithintelo ezingezizo zerhafu ziya kuthi ngokuthe ngcembe zikhuphe umphumo wokwenza urhwebo lwe-RCEP. Njengesixhobo sesibini ngobukhulu kunye nomvelisi weemitha emhlabeni, ukhuphiswano lwezixhobo kunye nemveliso yeemitha zase China ziya kuphuculwa ngakumbi, zixhamlisa amashishini kunye nabathengi.
Ixesha Post: Dec-02-2020
Iimoto ezihamba ngentambo ezi-6, IServo Motor Actuator, I-Hybrid Stepper Motor, Kuvalwe uMqhubi weSantya seMoto, I-220 Volt Ac Servo Motor, I-Ac Stepper Motor,